मोबाइलको अनलक पासवर्ड भुल्नुभयो ? यसो गर्नुस् — KhabarTweet
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १०, २०७४ समय: १८:११:४३
रिबुट डाटा (reboot Data)
वाइप डाटारफ्याक्ट्री रिसेट (Wipe data/Factory Reset)
इन्स्टल अपडेट (Install Update)
पावर डाउन (Power down) र,
एड्भान्स अप्सन(Advance Options)
४. वाइप डाटारफ्याक्ट्री रिसेट (Wipe data/Factory Reset) लाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई अर्को अप्सन देखाउँछ। जसमा एस yes सेलेक्ट गर्नुस्। तर त्यसो गर्दा तपाईँको फोनको तस्बिर, डाटा र कन्टेन्ट सबै डिलिट हुनसक्छ। यसो गर्नुअघि सोच्नु जरुरी छ ।
५। यी सबै ४ नम्बरको प्रक्रियामा आधारित हुनेछ। जसले केही समय लिन सक्छ। यसपछि भने तपाईँको स्विचअफ गरिएको स्मार्टफोनलाई रि(स्टार्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईँको हातमा अनलक भइसकेको स्मार्टफोन हुनेछ । एजेन्सी